kkchha.com:: चलचित्र निर्माता संघ नेपालको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न
केकेछ डटकम – प्रकाश धिताल – काठमाडौ मंसिर ८
नवल खड्का नेतृत्वको चलचित्र निर्माता संघले राजधानीको बागबजारस्थित होटेल हार्दिकमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राखेको थियो । चलचित्र निर्माता संघ नेपालको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राजकुमार राई नेतृत्वको चलचित्र निर्माता संघले चलचित्र निर्माता संघलाई नविकरण नगरेको र नेपाल चलचित्र निर्माता संघको भवन निर्माण कोषको २३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ र सदस्यता वापतको करिब ८ लाख रुपैयाँ हिनामीना गरेको भन्दै नवल खड्का नेतृत्वको चलचित्र निर्माता संघ गठन गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै, निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्काले भने,राजकुमार राई र म बिचमा व्याक्तिगत कुनै दुश्मनी छैन । कुनै राजनीति पार्टीले अभिप्रेरित गरेको कारणले चलचित्र निर्माता संघ फुटाईएको पनि हैन । निर्माता संघ न राजकुमार राईको मात्र हो, न नवल खड्काको मात्र हो ? सम्पुर्ण चलचित्र निर्माताहरुको साझा संस्थालाई नविकरण नगरी धरायसी बनाईएकोले नयाँ चलचित्र निर्माता संघ गठन गर्नु परेको हो । कुनै पदको लागी नयाँ चलचित्र निर्माता संघ गठन गरिएको हैन ।
यदी राजकुमार राईको नेतृत्व नेपाल चलचित्र संघले नविकरण र भवन निर्माण कोषको रकमलाई सदुपयोग गरिएको खण्डमा आज पनि हामी उहाँहरु संग हामी सहकार्य गर्न तयार छौ । तर उहाँहरुले हाम्रो कुरालाई वेवास्ता गरी मनोमानी ढंगले अगाडी बढ्न खोज्दा आजको यो स्थिती आएको हो । बग्ने पानीलाई खाल्डोमा कतिन्जेल थुनेर राख्न सकिन्छ र ? खाल्डो भरिएपछि पानीले पर्खाल भत्काएर बग्छ नै, त्यहि भएको हो आज ।